Daraasadaha ugu Fiican Xashiishadda Sannadkii Hore ee 2020 • Dawooyinka Inc.eu
ku bood tusmada guud
In ka badan ons
Wada-hawlgalayaasha & Wadashaqeynta
Sharci dejinta & Sharci dejinta
Adduunka oo dhan
Cilmi baarista ugu wanaagsan ee xashiishadda sanadkii la soo dhaafay ee 2020
Faafi jacaylka ✌🏼
Bishii Abriil, arday dhigata Mareykanka waxay codsatay in dib loo dhigo howlo dheeraad ah, iyadoo ku saleyneysa culeys weyn oo ka jira dukaankii ay ka shaqeynaysay. Iyadoo ku jees jeesaysa inay awoodo inay been ku qabato, macallinka ayaa yiri: "Shirkadehee baa furan hadda inta ay dowladda u xilsaaran tahay inay guriga iska joogaan inta ugu macquulsan?". Waxay ugu jawaabtay si daacadnimo leh, "Dukaanka haramaha ee ku dhow xerada, waxaan shaqeyneynaa waqti dheeraad ah waqtigan."
1 Hagaajinta fahamkeena nidaamka endocannabinoid
2 Noqoshada sharci ahaan xashiishadda loogu talagalay daaweynta xanuunka daba dheeraada
3 Cilmi baarista xashiishka waxay muujineysaa in THC aysan daruuri kaa dhigeyn caajis
4 Cannabinoids waxay daaweyn kartaa astaamaha cudurka Parkinson
5 La ogaaday dabiici ah THC-sida cannabinoid
Xaqiiqdii, maadaama adduunku u muuqday inuu istaagay gabi ahaanba, garaaca wadnaha warshadaha xashiishka ayaa runtii xoogaystay. In kasta oo cilmi baaris badan oo xashiish ah si ku meel gaar ah loo carqaladeeyay iyadoo jaamacadaha ay ku degdegeen inay dejiyaan hab maamuuska COVID-19, daraasaduhu way sii socdeen.
In kasta oo tirada daabacaadda la xiriirta xashiishadda ay ka hooseysay 2020 marka loo eego sanadkii ka horreeyay (maxay ahayn, marka laga reebo tusmooyinka suuqyada saamiyada?), Saynisyahannadu waxay sii wadeen inay soo bandhigaan waxyaalaha qarsoon ee geedkan cajiibka ah ee xiisaha leh.
Waa kuwan qaar ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee cilmi baarista xashiishadda sannadka 2020. (iyo rikoodhka, ardayga su'aasha laga qabo wuxuu ka helay nasiin macallinka)
Hagaajinta fahamkeena nidaamka endocannabinoid
Nidaamka endocannabinoid waxaa kaliya laga helay 1-meeyadii, isaga oo ka dhigaya nidaam cusub oo aan weli wax badan laga aqoon. Labada wax qabta ee nidaamka endocannabinoid, CB2 iyo CBXNUMX, waa isku mid laakiin si aad ah ayey u shaqeeyaan. Sidaa darteed, way adkayd in la helo dawooyin si firfircoon u hawlgeliya midka kale.
Cilmiga barakaysan ee op cannabinoids daroogada ku saleysan waxay noqon doontaa mid loogu talagalay in lagu daaweeyo ciladaha neerfaha iyo xanuunka, iyo sidoo kale in la siiyo neuroprotection, iyadoo si xushmad leh loo dhaqaajinayo soo-dhoweeyeyaasha CB2 iyada oo aan la hawlgelin qabtayaasha CB1, taasoo u oggolaanaysa faa'iidooyinka xasaasiyadda caabuqa sare. Si tan loo sameeyo, naqshadeeyayaasha daroogada waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa labada soo-dhaweed u egyihiin markay nasanayaan iyo goorta la hawl-gelinayo. Dhibaatada tan ayaa ah: way aad u yar yihiin.
Sannadkan, saynisyahannadu waxay ugu dambeyntii awood u yeesheen inay sawirro ka qaadaan CB1 iyo soo-duubayaasha CB2 ee dalal kala duwan iyagoo adeegsanaya habka dabka elektaroonigga ugu leh qabtayaasha iyo cabbiraadda sida ay u muujinayaan. Waxay ahayd tallaabo horumar leh oo horay loo qaaday, rajaduna waxay tahay in sawirradan loo isticmaali karo in lagu soo saaro daawooyin gaar ah oo ka faa'iideysanaya awoodda weyn ee nidaamka endocannabinoid.
CB1 iyo soo dhaweynta CB2 waxay sidoo kale ka ciyaaraan door tartan ah saameynta abaalmarinta xashiishadda. Sida laga soo xigtay daraasad la daabacay dhammaadka 2020, qabtayaasha CB1 ayaa mas'uul ka ah nooca raaxada leh ee qaddarka hooseeya THC, laakiin saameynta qiyaasta sare waxay noqoneysaa mid laga leexdo sababtoo ah kicinta soo dhaweynta CB2. Kicinta dhakhaatiirtan 'CB2 receptors' waxay yaraynaysaa xaddiga loo yaqaan 'dopamine', oo ah kiimiko maskaxda ku jirta oo qarinaysa macluumaadka ku saabsan waxaad u aragtay inay wanaagsan yihiin si aad u eegto oo aad u noolaato. Tani waxay ka hortageysaa saameynta kobcinta dopamine ee kicinta duubayaasha CB1.
Sidaa darteed, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in sareyntaada, iyo rabitaankaaga inaad raadiso, ay tahay natiijada dagaalka u dhexeeya soo-dhoweeyeyaashaada CB1 iyo CB2: Marka soo-dhaweynta CB1 ay aad u firfircoon yihiin, waxaad u baahan tahay mar kale sarreeya. Tani waxay tilmaameysaa faa iidada dheeriga ah ee daawooyinka loo yaqaan 'CB2 receptor reseptor' oo ah bartilmaameedyo daaweyn oo loogu talagalay dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha.
Noqoshada sharci ahaan xashiishadda loogu talagalay daaweynta xanuunka daba dheeraada
Dhakhaatiir badan ayaa diidan inay kugula taliyaan xashiishada inay noqoto daaweyn xanuun sababtoo ah la'aanta daraasadaha 'wanaagsan', taas oo ah, caddaynta tijaabooyinka laba-indhoolayaasha ah ee lagu xakameeyo placebo, heerka dahabka ee baaritaanka kiliinikada.
In kasta oo aysan sax ahayn in la yiraahdo daraasadaha xashiishka ee noocan oo kale ah ma jiraan, tirada daraasadaha loogu talagalay xashiishku ma daboolayo tiro aad u badan oo ku saabsan suugaanta caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, laba daraasadood oo heer sare ah oo dahabi ah ayaa la daabacay 2020 kuwaas oo taageeraya faa'iidooyinka yareynta xanuunka ee xashiishka ee xanuunka daba dheeraada.
Een daraasadda muujiyey in 48: 1 THC: CBDsaliida sifiican loogu maareeyo iyada oo la adeegsanayo tincture ayaa si weyn u wanaajisay tayada nolosha haweenka la ildaran fibromyalgia, oo ah nooc xanuun daba dheeraada oo caan ku ah daaweynta. Bukaanadani waxay cuneen celcelis ahaan 4,4 mg of THC maalintii waxayna soo sheegeen in xanuunkooda kala bar la gooyey, awooddooda waxqabad ee shaqada ay soo hagaagtay, niyadoodiina ay si weyn u fiicnaatay marka loo eego kuwa helay placebo. Tani waxay muujineysaa saameynta rajada leh ee kaliya qiyaas dhexdhexaad ah oo ah THC ee daaweynta xaaladdan liidata.
Een daraasad labaad tijaabiyey suurtagalnimada habka bixinta neefsashada u eg THC ee bukaannada qaba xanuunka neuropathic ee joogtada ah. Inkasta oo cilmi-baarayaashu kaliya eegeen hal mar oo degdeg ah, qiyaas yar oo ah THC oo ah 1 mg ayaa ku filneyd yareynta xanuunka marka loo barbar dhigo placebo, faa'iidooyinkuna waxay socdeen in ka badan laba saacadood.
Wadajir ahaan, daraasadahaani waxay taageeraan faa'iidooyinka THC ee daaweynta calaamadaha xanuunka daba dheeraada. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo in faa'iidooyinkan lagu gaadhay qadar yar ama dhexdhexaad ah oo ah THC, taas oo muhiim u ah in laga fogaado dulqaadka daroogada iyo luminta faa'iidooyinkeeda daaweynta.
Cilmi baarista xashiishka waxay muujineysaa in THC aysan daruuri kaa dhigeyn caajis
Ciyaartooy badan ayaa u jeesanaya xashiishadda si ay u xoojiyaan waxqabadkooda, u kordhiyaan raaxada una caawiyaan soo kabashada. Laakiin si ka duwan dacaayadaha xilligii Reefer Madness, xashiishadda ayaa dhaqan ahaan loo arkaa inay dadka ka dhigayso mid caajis badan.
Cilmi baarista Cannabis waxay muujineysaa in THC aysan qasab kugu aheyn caajis (afb)
In kasta oo ay jiraan ololeyaal kahortaga daroogada ah, saameynta THC ee dhiirigelinta kaqeybgalka tababarka adkeysiga si fiican looma fahmin. Waan ognahay in soo dhaweynta CB1, bartilmaameedyada asaasiga ah ee maskaxda ee THC, ay door muhiim ah ka ciyaaraan dhiirigelinta, laakiin saameynta THC lafteeda lama yaqaan.
Si aad si fiican ugu fahamto saameynta THC ay ku leedahay dhiirigelinta jimicsiga, saynisyahano Faransiis ah ayaa u tababaray jiir in ay wiish ku garaacaan kabaal si ay u furaan giraangirta orodka. Waxay ogaadeen in THC aysan wax saameyn ah ku yeelan doorbidida jiirka ee socodsiinta, sida ay ugu shaqeeyeen helitaanka gawaarida, ama waxqabadkooda markay socdaan. Natiijooyinkaani waxay soo jeedinayaan in THC aysan saameyn ku yeelan dhiirigelinta jimicsiga waxayna beenineysaa aaminaadda in sigaar cabista ay kaa dhigeyso caajis.
Qorayaasha cilmi baarista la helay, si kastaba ha noqotee, in hiddo ahaan baabi'inta duubayaasha jiirka ee CB1 ay hoos u dhigtay doorbidooda inay ordo. Tani waa muhiim maxaa yeelay isticmaalka xad-dhaafka ah ee THC wuxuu sababi karaa dulqaad, taas oo loo arko inay tahay hoos u dhigista saameynta THC, waxayna la xiriirtaa yareynta soo-dhoweeyeyaasha CB1.
Tani waxay soo jeedinaysaa in dhiirrigelintu ay hoos u dhici karto isticmaalka joogtada ah ee xashiishadda THC ee hodanka ah. Laakiin macaamiisha caadiga ah, waxay umuuqataa in waxoogaa hits ah aysan kaa hor istaagi doonin inaad ku ordo maylal.
Cannabinoids waxay daaweyn kartaa astaamaha cudurka Parkinson
Tobankii sano ee la soo dhaafay, saynisyahannadu waxay baareen doorka CBD iyo THC ee gaabinta horumarka cudurrada maskaxda ee da'da la xiriira sida cudurka Alzheimers. Dhawaan, waxay bilaabeen inay baaraan saameynta ay ku leeyihiin astaamaha cudurka Parkinson waxayna ogaadeen in cannabinoids ay gacan ka geysan karto yareynta calaamadaha qaarkood.
Tusaale ahaan, gariirku waa astaamaha ugu muhiimsan ee cudurka Parkinson kaas oo ka sii dari kara inta lagu jiro xilliyada walaaca, waxaana la soo jeediyay in walwalka iyo yareynta diiqadda ee CBD ay gacan ka geysan karto yareynta gariirka. Si taas loo tijaabiyo, saynisyahannada reer Brazil waxay sameeyeen indho-indhoole, xakamaynta placebo daraasadda la qaadashada CBD ee bukaanada qaba cudurka Parkinson inta lagu jiro tijaabada hadalka dadweynaha. Iyadoo la adeegsanayo aaladda loo yaqaan 'Acromrometer' si loo cabbiro cabbirka gariirku, waxay ogaadeen in hal qadar oo ah 300mg oo CBD ah ay hoos u dhigtay welwelka iyo gariirka labadaba marka la barbar dhigo placebo. Natiijooyinkaani waxay soo jeedinayaan in CBD ay ka caawin karto yareynta gariirka bukaanka cudurka Parkinson inta lagu jiro xaaladaha walaaca leh.
Laba astaamood oo kale oo muhiim u ah cudurka Parkinson waa gaabis dhaqdhaqaaq iyo qallafsanaan. Si loo daaweeyo astaamahan, bukaanjiifka waxaa badanaa loo qoraa daawo loo yaqaan L-DOPA (kani waa isla daawada loo isticmaalay buugga iyo filimka Awakenings dhacdaa). Dhibaatada dawadan ayaa ah inay u horseedi karto dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn oo loo yaqaan 'dyskinesia'. Markaa halka L-DOPA ay u oggolaan karto bukaan qaba cudurka Parkinson inuu si fudud u dhaqaaqo, wuxuu u rogi karaa dheelitirka dhinaca kale wuxuuna sababi karaa dhaqdhaqaaqyo aan loo baahnayn.
Waxa xiisaha leh, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu caawin karo xannibaadda dhaqdhaqaaqyadan aan loo baahnayn, sida xannibaadda soo-dhoweeyeyaasha CB1 iyo firfircoonida qabtayaasha CB2 Nasiib wanaagse, THCV (tetrahydrocannabivarin), oo ka mid ah kuwa badan ee cannabinoids ee ay soo saarto dhirta xashiishka, waxay la mid tahay astaanta dawooyinka looga baahan yahay in ay dhexdhexaad ka noqoto dyskinesia.
Saynisyahanno Isbaanish ah tijaabiyey utility-ka THCV wuxuu si toos ah uga soo horjeedaa L-DOPA-dyskinesia-ka oo ah qaabka jiirka ee cudurka Parkinson. Waxay shaaca ka qaadeen in THCV ay gaabisay saameynta L-DOPA ee dhaqdhaqaaqa dyskinetic, waxayna yareysay xoogooda markii la joogo. Natiijooyinkaani waxay soo jeedinayaan in THCV laga yaabo inay leedahay faa'iidooyin dheeri ah oo ka badan L-DOPA iyadoo la yareynayo dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn waxayna hoosta ka xariiqaysaa ballanqaadyada daaweynta ku saleysan cannabinoid ee cudurka Parkinson.
La ogaaday dabiici ah THC-sida cannabinoid
Saynisyahannadu waxay daraasad ku sameeyeen waxyaabaha ay ka kooban tahay xashiishadda muddo ku dhow boqol sano waxayna aqoonsadeen ku dhowaad 150 cannabinoids ilaa maanta. Waa wax lagu farxo markii Cannabinoid cusub la ogaado sababta oo ah, sida dhowaan la ogaadey mummy Masaarida, cannabinoids cusub ayaa u noqda tilmaamo si ay si fiican u fahmaan qarsoodiga ka dambeeya saameynta dhirta.
Saynisyahanno Talyaani ah ayaa go'doomiyay Cannabinoid cusub, THCP (tetrahydrocannabiphorol), laga bilaabo culeyska FM2 oo la tijaabiyay awooda lagu xirayo soo dhaweynta endocannabinoid iyo saameyn ku yeelashada dhaqanka jiirka. THCP waxay ku daydaa saameynta dhaqameed ee ay sababtay THC waxayna umuuqatay inay si aad ah uga sii xoog badan tahay waxa dadka kale ay ka soo sheegeen THC. Tani waxay ka muuqatay xiriir sare oo ku xiran qabtayaasha endocannabinoid, CB1 iyo CB2, kuwaas oo lagama maarmaan u ah dhagxaanta, yareynta xanuunka, iwm.
Marka la barbardhigo daraasado dhowr ah, waxay umuuqataa in THCP ay kuxirantahay soo dhoweeyeyaasha CB30 qiyaastii 1x dhaqso badan iyo kuwa CB6 qabtayaasha 2x ka dhakhso badan THC. In kasta oo taasi micnaheedu ahayn in THCP uu ku siinayo 30x in ka badan THC, waxay macnaheedu tahay in xitaa xaddiga yar ee THCP ay yihiin dambiilayaal suurtagal ah sababta noocyo kala duwan ay u leeyihiin saameyn khamriyo kala duwan, xitaa haddii ay leeyihiin isku mid THC. Si ay arintu sidaas u noqoto, wali waxaa jira su’aalo badan oo laga jawaabayo. Immisa, tusaale ahaan, ayaa ku soo dhaca maskaxda? Si kastaba xaalku ha ahaadee, isha ku hay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan THCP sanadaha soo socda.
Ilaha ay ka mid yihiin CannabisIndustry (EN), Leafly (EN), Dhexdhexaad (EN)
Waa maxay waayo-aragnimadaadu? La wadaag kuwa kale ee hoose.
2020cannabiscaafimaad lehcaafimaadkacilmi baarisAdduunka oo dhan
"Milkiile kasta oo dukaan kafee leh waa milyaneer"
Henk de Vries (1950) ayaa hore loogu arkay dokumenteriga Cannabis. Ganacsade-dhaqameedkan ayaa ...
Daraasadda: Hurdo yaraanta ayaa hurdo u yeelata hab-nololeed la mid ah xashiishadda marka aad la kulanto munkariska
Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa in hurdo la'aan kugu filan ay saamayn isku mid ah ku yeelato xulashooyinkayada cunno sida ...
Tilmaamaha Hadiyadaha: 8 hadiyado iyo hadiyado loogu talagalay dadka wax cunaya iyo kuwa jecel CBD inta lagu jiro fasaxyada
Aqoonyahanada Cannabis iyo kuwa jecel runta (aka, cannasseurs ama dadka jecel weed ka badan marmar ...
Leave a Reply Ka noqo jawaab
cinwaanka email ma la soo saari doonaa. Meelaha loo baahan yahay ayaa lagu calaamadeeyay *
Tirada mugdiga Kaj Hollemans (KHLA)
Maxay qorshooyin qurux badan ay xisbiyada siyaasadeed ee Nederland la yimaadeen markay tahay siyaasada daroogada?
Ku saabsan siyaasadda MDMA: Inaad Ka fikirto (Tanka) ama inaadan ka fikirin (taangiga)
Qaabka loo wajahayo qaran dumiska waa erey kale oo loogu talagalay dagaalka daroogada
7 Oktoobar 2020
Ugu dambeyntii wargeysyada
Boqolaal shirkadood oo Nederland ah ayaa si sharci daro ah shaqaalaha uga baaraya dawooyin
Cannabis-ka Bermuda iyo Barbados: Dhaqaalaha wuxuu ubaahanyahay inuu sare u kaco COVID-19 awgood
Cilmi baaris: MDMA ee daaweynta khamriga waxay muujineysaa hoos u dhaca isticmaalka 80%
Waa maxay daraasadaha 2021 waxay ka yiraahdaan isticmaalka xashiishadda waayeelka ama dadka waaweyn
Dawladda Thai waxay kor u qaadaysaa xashiishadda danaysi ganacsi
Saamiyada & Dhaqaalaha
Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine dembi go'aan qaadasho daroogada waxbarashada Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha KHLA sharci ahaan sharciyeynta sharci-dejinta lsd mdma daawo cannabis daawada cawska microdosing Nederland netflix cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc
Ugu dambeyntii wararka
Raac naga tag!
Copyright DrugsInc.eu - Xuquuqda oo dhan 2021
Back Si Top